बालगायक सचिन परियार र बिनिता कुमालबिचको पहिलो भेट,अन्तरवार्तामै लास्टै हसाए- हेर्नुस (भिडियो सहित ) – Ap Nepal
बालगायक सचिन परियार र बिनिता कुमालबिचको पहिलो भेट,अन्तरवार्तामै लास्टै हसाए- हेर्नुस (भिडियो सहित )
सचिन परियार र बिनिता कुमालबिचको पहिलो भेट, लास्टै हसाए उनिहरुले (भिडियो हेर्नुस)
पछिल्लो समय सामाजिक संजालमा यत्र तत्र सर्बत्र भएका बाल गायक सचिन परियार र दर्शकहरुले एकदमै रुचाउनु भएकी सानी गायिका नानी बिनिता कुमाल आज पहिलोपटक एकसाथ मिडियामा आएका छ्न । यो यी दुइजनाबिचको पहिलो भेट हो ।
उनिहरुले एकअर्कालाइ भेट्न खुब रहर गरेकाले मिडियाकर्मी साथिले आज उनिहरुको भेट गराएका छ्न । पछिल्लो समय उनिहरु दुबैजना उनिहरुको कलाका कारण सामाजिक संजालमा चर्चाको विषय बनेका छ्न ।
सचिन परियार र बिनिता कुमालले गीत गाएर खुब मनोरञ्जन पनि दिलाए । सचिन परियारको गीत गाउने कलामा झन सुधार भएको हामी देख्न सक्छौ । जस्तै कुरालाइ पनि सचिनले सजिलै गीतमार्फत ब्यक्त गरेको हामी पाउन सक्छौ । ठ्ट्यौली पारामा सचिनले धेरै गीत गाएर मनोरञ्जन दिलाए । उनले बिनितालाई बहिनी भन्दै उनको खबरपनि गीतमार्फत नै सोधे ।
उनिहरुलाइ एकसाथ एकदमै राम्रो देखिएको छ । सचिन र बिनिताले एकअर्कालाई भेट्न पाउँदा एकदमै खुशी लागेको कुरा पनि खुलाए । सचिनले बिनिताको हालखबर अनि उनको पढाइ र परिवारको बारेमा पनि सोधे । उनिहरुले पालैपालो गीत पनि गाए । बिनिताको बाबू बिदेशमा बिरामीअबस्थामा रहेको कुरा पनि सचिनलाइ थाहा रहेछ । बिनितालाइ बाबु अहिले राम्रो रहेको कुरा पनि खुलाइन । भैलो खेलेको पैसा बैंकमा रहेको भन्दै हसाइन उनले ।
सचिनले भने गीत गाएर कमाएको पैसा भन्दै गोजिबाट केही पैसा पनि झिके र बहिनिलाइ दुइसय दिने पनि बताए । राम्रोसग पढ भन्दै २०० रुपैया पैसा दिए सचिनले बिनितालाइ र बिनिताले त्यो पैसाले कापिकलम किन्ने पनि बताइन ।
गीत आउदैन त तिम्रो भनी सोध्दा सचिनले पढ्नमा बिजि रहेको कुरा बताए । सचिनले हरकुरालाइ गीतमा ढाल्छ्न । पढाइको विषयमा पनि एक गीत गाए सचिनले । मिडियाकर्मिले सचिन र बिनिताका लागि जाडोको कपडा पनि लगिदिएका रहेछ्न ।
Prevएपेन्डिसा, इटिस रोग भनेको के हो ? यस्ता हुन्छन् लक्षणहरु ? सबैले जानी राखौं
Next१ महिनामै पायल्स ठिक पार्न चाहानुहुन्छ ? उसोभए औषधीका साथै यो १ चिज खानेगर्नुहोस् !